कर्णाली र मधेश राज्यद्धारा उपेक्षित क्षेत्र: उपप्रधान मन्त्री यादव – Daunne News
कर्णाली र मधेश राज्यद्धारा उपेक्षित क्षेत्र: उपप्रधान मन्त्री यादव
जुम्ला उपप्रधान एंव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले कर्णाली र मधेश राज्यद्धारा उपेक्षामा पारिएका क्षेत्र भएको बताएका छन् ।
राज्यले कर्णाली र मधेश सधै उपेक्षित क्षेत्रको रुपमा हेर्यो उनले भने राजनितिक, प्रशासनिक र आर्थिक रुपमा पनि यि क्षेत्र पछाडी छन् । कर्णाली र भुगोल र मधेश जातियाताका कारण शासकको उपेक्षामा परेको उनको भनाई छ ।
नेपालमा लामो समय चलेको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले यहाँको नागरिक अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको भन्दै पछि परेका र पारिएको जाती , समुदायलाई मुल धारमा ल्याउन संघियता आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
विकासको बाधक भुगोल होईन, उनले भने विकास गर्न मानसिकता सकारात्मक हुन जरुरी छ । अव कोहि पिछडिएको, दुर्गमको हुदैन । संघियताको मर्म अनुसार तीन तहका सरकार गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । आजै उनले कर्णाली मै पहिलो पटक स्कुल अफ जनस्वास्थ्य कार्यक्रम उद्घाटन समेत गरेका छन् ।
जुम्ला पुगेका यादवले आगामी आर्थिक् वर्षको लागि एमडिपि र एमविविएस प्रमुख प्रथामिकतामा रहेका बताएका हुन् । यस सगै पश्चिम नेपालको स्वास्थ्य हव क्षेत्रको रुपमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अव स्नातक तहको स्कुल अफ जनस्वास्थ्य कार्यक्रम औपचारिक रुपमा शुरु भएको हो । यस अघि प्रतिष्ठानमा एच. ए. नर्सिङ्ग पढाई भईरहेका छन् ।